Lubrication mgbapụta, Oil Electric Motor, Fluid mgbapụta - Jianhe
Sistemu mmanụ mmanụ
INDUSTRIAL ROBOTIC SYSTEMS LIMITED, JIAXING JIANHE MATERIAL CO., LTD, na -arụ ọrụ nke ọma n'ịzụlite, na -emepụta na n'ichepụta sistemụ mmanye etiti, sistemụ mmanu akpaka, sistemụ mmanu mmanu, sistemụ mmanye mmanụ ..
HTD Series mgbapụta mmanụ mgbapụta
DR Series Electric Oil/Griiz mmanye mgbapụta ...
DRD Series Oil Electric mmanye mgbapụta （G ...
DCR 1L/ 2L 220V Electromagnetic Automatic Lubri ...
XEP20/XEP20A mgbapụta griiz plunger mgbapụta
LSG 500CC/800CC mgbapụta griiz aka
HP-5 Obere olu aka plastic pistin obere po ...
Mpempe mmanụ eletriki mepere emepe
Amalite Ugbu a
Nkọwa mgbasa ozi
Nwụnye na mmezi Maka sistemụ mmanu etinyere mmanụ
1) Nnukwu nrụgide resin sooks na ngwa njikọta Maka ọkpọkọ mmanụ (na-ejikọ onye na-ekesa ya) ọkpọkọ mmanụ nke abụọ (njikọ onye na-ekesa ya na mmanụ), dayameta mpụga nke isi-njikọta isi ¢ 6.
Ọnwa Iri 31, 2021
Gịnị bụ sistemụ mmanu na -aga n'ihu na ụkpụrụ ọrụ ya?
Otu sistemụ si arụ ọrụ: 1. Usoro na -aga n'ihu nwere ngalaba mgbapụta griiz eletriki, onye nkesa na -aga n'ihu, ihe mejupụtara ọkpọkọ na nleba eletriki. 2. A na -amịpụta griiz, na -ekesa ya site na onye nkesa na -aga n'ihu, ma mesịa bufee ya na ebe mmanye. 3. Griiz ...
Otu esi eji sistemụ mmanu maka njikwa mmanu mmanu na mmezi nke nha ...
2/3 nke ọdịda akụrụngwa na -emetụta mmanye. Site na njikwa mmanu mmanu, ọ na -enyere aka belata ọdịda akụrụngwa na oriri mmanye, melite ntụkwasị obi na nnweta akụrụngwa, wee mepụta uru akụ na ụba ozugbo maka ụlọ ọrụ. Lubricatio zuru oke ...
Nnyocha nke ikpe maka mmanye etiti nke onye na -ebubanye mmanu mmanụ Jianhe
Mmanya na -agbakọ ọnụ bụ ka a na -ete ọtụtụ ruo ọtụtụ isi mmanụ n'otu oge site na ijikwa mgbapụta site na onye njikwa. Sistemu mmanụ mmanye na-aga n'ihu nwere ike ịgbakwunye griiz na akụkụ ndị chọrọ mmanye na oge kwesịrị ekwesị, nke edoziri, ọnụ ọgụgụ na usoro.